RASMI: Arjen Robben oo ku dhwaaqay inuu isaga fariistay gabi ahaanba ciyaarista kubadda cagta – Gool FM
(Yurub) 04 Luulyo 2019. Xiddiga reer Holand ee Arjen Robben ayaa ku dhawaaqay maanta oo Khamiis ah inuu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta, xili da’adiisu ay tahay 35 jir, kaddib mudo dhan 10 sano uu la joogay kooxda Bayern Munich.
Arjen Robben oo qandaraaska uu kula joogay kooxda Bayern Munich uu soo idlaaday 30-ka bishii June ee lasoo dhaafay, ayaa u sheegay warbaahinta dalka Netherlands.
“Kani shaki kuma jiro inuu ahaa go’aankii ugu adkaa ee aan qaatay xirfadeyda kubadda cagta, qalbigaygu wuxuu i leeyahay haa, balse jirkeyga wuxuu u dhahayaa Maya”.
Arjen Robben oo soo xirtay maaliyadaha kooxo ay ka mid yihiin Eindhoven, Chelsea iyo Real Madrid ayaa qiray bishii May ee lasoo dhaafay inuu ku fikirayo in gabi ahaanb uu ka fariisto ciyaaraha kubadda cagta.
Robben ayaa kula guuleystay kooxda uu ciyaaraha kaga fariistay ee Bayern Munich 1 jeer oo tartanka Champions League ah, iyo 7 jeer ee ah horyaalka Bundesliga.
Guud ahaan Arjen Robben ayaa kooxihii u u soo ciyaaray oo dhan waxa uu u saftay 606 kulan waxaana uu u dhaliyay 210 gool, halka xulkiisa qaranka Netherlands uu u saftay 96 kulan, wuxuuna u dhaliyay 37 gool, taasoo ka dhigan inuu guud ahaan Robben dhaliyay 247 gool xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, halka uu kor u qaaday 30 koob.